Nifidy ny Kandidà Mpanohitra Capriles Ny Ankamaroan’Ireo Venezoeliana Ao Panama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2013 15:27 GMT
Nanaraka akaiky ny fifidianana natao tao Venezoelà tamin'ny Alahady 14 Aprily 2013 lasa teo i Panama, izay ahitana mponina Venezoeliana marobe. Nahitana ny fihetseham-pon'ireo Venezoeliàna monina ao Panama ny tambajotra sosialy, tahaka izany ihany koa ireo Panameana te-hanaraka ny zava-nitranga tao Venezoela, mpifanolo-bodirindrina akaiky azy.
Panamaniana daily Día a Día (@DiaaDiaPa) [es] nilaza fa Venezoeliana teo amin'ny 900 teo no nandeha nifidy:
@DiaaDiaPa: Tamin'ity fotoana ity, nanisa izahay fa Venezoeliana manodidina ny 900 teo no nandeha nifidy tao amin'ny ambasady Venezoeliana #panama
Nanaraka akaiky ny fifidianana ireo mpiserasera Panameana, niandry ny valim-pifidianana, ary nisy ireo sasany sahy nampahatsiahy ny vanim-potoana tao Panama izay nitondran'ilay mpanao didy jadona Manuel Antonio Noriega. Tamin'ny Mey 1989, rehefa resy tamin'ny fifidianana i Noriega, nanome baiko ny fitsarana misahana ny fifidianana izy mba hilaza fa tsy manan-kery ny latsa-bato ary heverina toy ny tsy misy. Niteraka fanararaotana maro sy herisetra fanahy iniana natao izany, izay nahatonga ireo Panameana nitsoa-ponenana tany Etazonia. Mpisera Twitter Panamá Vieja Escuela (Old School Panama) (@PanamaHistoria) [es] nilaza hoe:
Venezoeliana nandeha nifidy ao Panama. Sary avy amin'ny @Yacare45 tao amin'ny Twitter.
@PanamaHistoria: Manahy aho fa vahoaka maro no hiresaka momba ny toe-draharaha ao Venezoela ka ho adino i #Panama. Aza adinointsika i Noriega sy ireo jilohambotony.
Raha nandre ny valim-pifidianana izy ireo, nandefa afomanga avy ao amin'ny Ambasadin'i Venezoelà ao Panama ireo vondrona mpanohana ilay mpandresy, Nicolas Maduro, filoha lefitr'i Chavez. Venezoeliana monina ao Panama, Marian Queen (@inagc) [es] nilaza tao amin'ny kaonty Twitter-ny hoe:
@inagc: Mankalaza ny fandresena amin'ny alalan'ny fandefasana afomanga ireo mpiasa ao amin'ny ambasadin'i Venezoelà. Matahotra ny ho very asa ao amin'ny ambasady?
Tsy faly kosa ireo mpanohana an'i Capriles ary niezaka niditra an-keriny tao amin'ny Ambasadin'i Venezoelà ao Panama, ary niampanga ny fididianana ho nisy hosoka. Tsy maintsy niditra an-tsehatra ny polisy mba hiaro ny Ambasady araka ny tatitra avy amin'ny habaka La Verdad (Ny Marina) [es]:
Niditra an-tsehatra ny polisy rehefa niezaka niditra an-keriny tao amin'ny faritry ny masoivoho, ao amin'ny rihana faha-dimy ao amin'ny tranoben'ny Banky ao an-drenivohitry Panameana ireo mpanohana ny kandidà Henrique Capriles, tamin'ny Alahady alina, ary nitabataba ihany koa izy ireo fa feno “hosoka” ny fifidianana.
Tamin'ny ora farany, olom-pirenena Venezoeliana 1.036 monina ao Panama no nanefa ny adidiny tamin'ny fandehanana mifidy, nifidy ny kandidàn'ny mpanohitra Henrique Capriles ny ankamaroan'izy ireo. Hoy ny habaka El Venezolano [es] nitatitra:
Farany, nilaza i Miguel Martínez de la Riva, lehiben'ny kaomandao Simon Bolivar ao Panama fa Venezoeliàna 1.036 no nifidy tao Panama, 991 tamin'izy ireo nifidy ny kandidà mpanohitra Henrique Capriles.